August 2020 – Kalfadhi
Golaha Shacabka oo maanta ansixiyay Hindise-Sharciyeedka Qareennada Soomaliyeed
August 31, 2020 August 31, 2020 Hassan Istiila
Xildhibaannada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay Hindise-Sharciyeedka Qareennada Soomaliyeed, kaas oo Golaha uu ka doodayay muddooyinkii lasoo dhaafay. Guddoomiyaha Golaha Shacabka BJFS Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxman Iyo Guddomiye ku xigeenka koowaad Mudane Cabduweli Sheekh Ibraahim Muudey, ayaa si wada jir ah u shir-guddoominayay kulanka. Guddoomiye Mursal ayaa sheegay in 139 Mudane ay oggolaatay Hindise Sharciyeedka, iyadoo ay diideen labo mudane, mana jirin mudane ka aamusay. Dhinaca kale xildhibaannada ayaa isla maanta ka dooday akhrinta 1aad ee Hindise-sharciyeedka Hay’adda Baaritaanka Iyo Sharciyadda Beeraha Soomaliyeed iyo akhrinta…
Guddiga Arrimaha Bulshada Baarlamaanka Puntland oo warbixin ka dhageystay Wasiirka Caafimaadka
August 31, 2020 Hassan Istiila
Guddiga Arrimaha Bulshada iyo Dhaqanka Golaha Wakiillada DPL oo maanta kormeer ku tagay Wasaaradda Caafimaadka DPL, ayaa halkaas warbixin kaga dhageysteen Wasiirka & Agaasimaha Guud ee Wasaaradda. Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka DPL, Jaamac Faarax Xassan oo uu weheliyo Agaasimaha Guud Cabdrisaaq Xirsi Xassan ayaa ka warbixiyey shaqooyinka Wasaaradda, qorshayaasha degsan, waxyaabaha u qaab-soomay iyo weliba caqabadaha jira, iyagga oo sidoo kalena, su’aalo laga weydiiyay arrimaha ay ka hadleen, Guddiguna u hawlgalidoonaan sidii wax looga qaban lahaa caqabadaha ka jira Wasaaradda doorkoodna ay ka qaadanayaan. Puntland ayaa ka mid ah deeggaanada wali…
“Boqolkiiba 14 oo keliya oo dhallinyaro ah ayaa ku jirta Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya”
Dhallinyarada oo 75 boqolkii ka ah bulshadeenna Soomaaliya ayaa doodo xooggan wali ka qaba ka qeyb-gellin la’aanta ballaaran ee siyaasadda dalka, gaar ahaan hay’adda dowliga ah. Inkasta oo sannadkan 2020/21 la filayay in dalka ay ka dhacdo doorasho Qof iyo Cod ah oo dhallinyaro badan la saadaalinayay in ay kasoo muuqan doonaan, ayaana suura-gellin, waxaana dib dalka uu ugu noqon doonaa doorasho dadban oo hoggaankeeda ay door ku yeellan doonaan odayaasha dhaqanka. Xildhibaan Hani Maxamed Aadan, oo aaminsan in dhallinyarada ay ku matasho Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa Kalfadhi…
Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta ka doodaya labo Hindise sharciyeed
Xildhibaannada Golaha Shacabka ee Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa maaanta lagu wadaa in ay kulan ku yeelanayaan xaruntooda ku meel gaarka ah ee Villa Hargeysa. Mudanayaasha ayaa lagu wadaa in ay ka doodaan akhrinta 1-aad ee Hindise sharciyeedka adeegyada baaritaanka beeraha Soomaaliyeed, kaas oo ay soo diyaarisay wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowladda Soomaaliya. Sidoo kale xilidhibaanada golaha shacabka ayaa lagu wadaa inay akhrinta labaad marsiiyaan hindise sharciyeedka hay’adda socdaalka iyo Jinsayadaga. Halkan kala soco kulanka..
Xildhibaano ka tirsan Hirshabelle oo ka shiray Guddiga farsamada ee soo xulista Baarlamaanka
August 30, 2020 August 30, 2020 Hassan Istiila
Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Hirshabeelle oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Mogadishu ayaa soo dhaweeyay guddiga farsamada ee soo xulista Baarlamaanka Dowlad goboleedka Hirshabeelle ee uu dhawaan Magacaabay Madaxweyne Maxamed Cabdi Waare. Siyaasiyiin kasoo jeeda degaannada Hirshabeelle, ayaa dhaliil ka qabay habka loo maray magacaabista xubnaha guddiga, waxaana xildhibaannada ay ugu baaqeen siyaasiyiinta in la taageero guddiga. Madaxweyne Maxamed Cabdi Waare ayaa maalin ka hor magacaaby guddiga oo ka kooban 12 xubnood. Hirshabelle, ayaa ka hor sannadkan waxaa ay gali doontaa doorashooyinka guud iyada oo qaban-qaabada doorashada laga dareemayo deegaannada…
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo sheegay in shirkii Dhuusamareeb saddex uu yahay mid mira dhalay
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow, oo ka tirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka ayaa sheegay in uu soo dhoweynayo heshiiskii kasoo baxay shirkii Dhuusamareeb saddex ee lagu go’aamiyay nooca doorasho ee dalka Soomaaliya. Shirka waxaa ka qeyb-galay saddex maamul oo kala ah Koonfur Galbeed, Hirshabelle iyo Galmudug, Gobolka Banaadir iyo dowladda dhexe, waxaana ka maqnaa maamulada Puntland iyo Jubbaland. Mudane Jeesow, ayaa sheegay in shirkaasi uu u arko mid mira dhalay oo guuleystay, madaama ay soo saareen doorashada nooceeda, taas oo hadda ka dhici karta dalka Soomaaliya. Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow, ayaa…
Guddoomiye Cabdi Xaashi “Dal kasta oo qaata nidaamka Federaalka, waa qasab in uu yeesho labo aqal”
August 30, 2020 Hassan Istiila
Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Xaashi Cabdullahi iyo Madaxweynaha Dowladda Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye ayaa habeen ka hor furay Kalfadhiga 2-aad ee Golaha Wakiillada Dowladda Galmudug. Khudbada Guddoomiyaha ayaa waxaa uu kaga hadlay dadaalada maamulka, gaar ahaan Baarlamaanka, waxaana uu ammaanay madaxda maamulka Galmudug. Mudane Xaashi ayaa sheegay in dal kasta oo adduunka ah ee qaata nidaamka Federaalka in ay qasab tahay in uu yeesho labo aqal, balse waxaa uu xusay in dalka Soomaaliya wali uu ku cusub yahay nidaamka. Aqalka Sare waxaa uu qaabilsanyahay…
Guddoomiyaha Baarlamaanka Dowlad Goboleedka Galmudug Dr Maxamed Nuur Gacal ayaa maanta shir-gudoominayay Kalfadhiga 2-aad kulankiisa 1-aad ee Baarlamaanka Dowlad Goboleedka Galmudug. Fadhigii maanta ayaa looga hadlay xaaladda guud ee maamulka iyo sidoo kale dardar-galinta shaqooyinka Baarlamaanka. Madaxweynaha Dowladda Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye ayaa habeen ka hor furay Kalfadhiga 2-aad ee Gollaha Wakiillada Dowladda Galmudug. Xafladda furitaanka kalfadhiga 2-aad ee Baarlamaanka Galmudug oo ka dhacday xarunta Shiirkole, waxaa ka qeyb galay Guddoomiyaha Aqalka sare Mudane Cabdi Xaashi, Gudoomiyaha Baarlamaanka Dr. Maxamed Nuur Gacal, Xildhibaano, Wasiiro, Bulsha rayidka, siyaasiyiin iyo marti…
25 Agoosto 2020, Guddiyada Dib u eegista Dastuurka ee heer Federaal oo kala ah Guddiga La-socodka Dastuurka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya iyo Guddiga Madaxabanaan ee dib u eegista iyo Hirgalinta Dastuurka ayaa soo gabo-gabeeyay Habraacii Doodda iyo Ansixinta Dastuurka KMG. Habraacan oo la horgeeyay 27/11/2019, Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya labadiisa Gole oo wada fadhiya si ay wadajir ugu ansixiyaan ayaanan wali la ansixinin, taasoo keentay in guddiyadu wax-ka-bedel labaad ku sameeyaan si labada Gole kulamo kala gaar-gaar ah ugu ansixiyaan waqtiyadan dhaw. Waxaa kasoo baxay shirka Guddiyada: 1) In Guddiyadu ay la…
Gudoomiyaha Aqalka sare ee Baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa magaalada Dhuusamareb uga qayb-galay munaasabadda furitaanka kal-fadhiga 2-aad ee Baarlamaanka Galmudug. Munaasabaddaas, waxaa sidoo kale ka qeyb-galay madaxwaynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye (Qoor-Qoor),Sanataro, Wasiiro, maamulka caasimada galmudug iyo marti-sharaf kale oo lagu casuumay, waxaa khudbad dheer ka jeediyey Cabdi Xaashi Cabdullaahi. Guddoomiyaha ayaa sheegay in Aqalka Sare uu Baarlamaanka Galmudug usoo diri doonno Guddiyo. Gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Maxamed Nuur Gacal ayaa khubad uu ka jeediyey munaasabada ku soo bandhiga qorshayaasha horyaala baarlamaanka 2-aad ee Galmudug. Ugu dambayn waxaa munaasabada soo…